I-TV ye-Enif: Konke okufuneka ukwazi | I-RoidHub
Ivenkile ekumgangatho ophezulu yeGoogle
Blog ukonwatyiswa ekhaya
»Umabonwakude we-Enif: Konke ekufuneka ukwazi
Umabonwakude we-Enif: Konke ekufuneka ukwazi
4.7 / 5 ( 7 iivoti )
Idrama njengendlela yokubonisa ubugcisa yenye yezona zinto ziqhelekileyo kunye nezona ndawo ziphambili zokuzonwabisa kubaphulaphuli abaninzi behlabathi. Sithetha nge-Enif TV kwaye iyinto efanelekileyo kolu hlobo lokuzonwabisa.
Abaphulaphuli base Mzantsi Asia banolwazelelelo lwe-opera yesepha kwaye kungenxa yoko le nto emva kweefilimu, yidrama yeTV kunye nezinto ezilandelwayo ezenza eyona mithombo yolonwabo.
Kungenxa yeso sizathu le nto ukhula kolu shishino lokuzonwabisa lwe-mini kwisithili lonke luthatha uthotho lwezihloko ezahlukeneyo zentlalo, inkcubeko kunye nezinye izihloko.
Kwangelo xesha, kweli xesha lokudityaniswa kwehlabathi. Sivelelwa ziinkcubeko zakwenye imimandla. Ngapha koko, umntu wanamhlanje yindibaniselwano yeenkcubeko ezininzi uninzi lwazo lwasuswa ngokwendawo kunye nangokomzimba kuye.
Enye yendlela yempembelelo yenkcubeko kukufumaneka komxholo wokuzonwabisa ovela kuyo yonke iplanethi. Ngaphakathi, kukho imithombo embalwa yemveliso yedrama enokutsala abaphulaphuli kwimimandla eyahlukeneyo yehlabathi. Omnye wolu hlobo ngumzekelo weShishini loMdlalo weTurkey.
Yintoni i-Enif TV
Iindlela ezizezinye ze-Enif TV
I-YouTube: I-ErTgrul ye-TRT yi-PTV
I-Urdu / Hind Dramas kwisoftware ye-Android
Esi sikhululo seYouTube esekwe eDubai kwaye ijolise ekuziseleni owona mxholo uphuma kwimizi mveliso eyahlukeneyo kwiplanethi yonke. Eli jelo lenzelwe ukuvelisa ezinye zevidiyo zomxholo omangalisayo wababukeli abakwiHindi nase-Urdu.
Oku kubandakanya ukuguqulelwa kweendlela ezinkulu zomsebenzi ezivela kwimimandla eyahlukeneyo yabaphulaphuli abathetha isi-Urdu kunye nesiHindi.
Ungazifumana nangaliphi na ixesha kunye nendawo ngaphandle kokuhlawula umrhumo wobulungu kwisiteshi. Ke ukuba ufuna i-Urdu okanye i-Hindi ebizwa ngokuba yi-Kurulus Osman Episode okanye fan ye-Urdu / Hindi ebizwa ngokuba yi-Ertugrul Ghazi. Ungayijonga yonke le nto kwifomathi oyikhethileyo.
Into elungileyo malunga neYouTube kukuba ukwazi ukufikelela kumxholo kwifowuni yakho ephathekayo okanye kwangaxeshanye uqhagamshele kwiTV yakho ye-TV kwaye uyibukele kwiscreen esikhulu nosapho lwakho kunye nabahlobo.
Nokuba uchitha impelaveki ekhaya okanye uyahamba phakathi komsebenzi wakho nekhaya. Unokuqhagamshela kwi-intanethi kwaye uqalise ukubukela apho ushiye khona ixesha lokugqibela.
Ngokukodwa, ukuba ucinga ukuqala ukubukela i-Osman Ghazi Turkish serial. Eli lijelo ofanele ulilandele. Ungazifumana zonke iziqendu ezilandelelaniswe wena. Ubhalwe ngolwimi lwe-Hindi kunye neUrdu ngeziphumo zezandi ezifanelekileyo, awuzuphoswa ukubetha apha.
Ukuba uyazibuza ngezinye iindlela zeli jelo le-TV ye-Enif ye-Enif. Emva koko qhubeka ufunda. Apha siza kukunika iinkcukacha zeminye imithombo yolwazi ukonwabela isiTurkey kunye neminye imixholo ebhalwe ngesiHindi nangesiUrdu. Unokusebenzisa ifowuni yakho ephathekayo, ilaptop, okanye ikhompyuter yakho ukonwabele ukuzibandakanya kwezi serial zomdlalo weqonga.
Le yiphiko lokuzonwabisa lePakistan iTV yeNetwork. Umsasazi osemthethweni welizwe unikwe ilungelo lokuqalisa uqhwithela lwala maxesha ngokuqalisa kukaDiliris Ertugrul ophinde wabanjwa njengo-Ertugrul Ghazi.
Ibonakalisa uguqulelo lwe-Urdu dubbed ukuba ababukeli baseHindi banokonwaba ngaphandle kobunzima.
Ukuba awufuni ukubukela umdlalo kwithelevishini ngaso nasiphi na isizathu. Kukho ezinye iindlela zokuphonononga kwakhona. Ungaya kwiYouTube: i-TRT Ertugul yi-PTV.
Eli lijelo elisemthethweni lokwazisa ngeziqendu zomdlalo weqonga we-Ertugrul kuhlobo oluthiweyo. Ungaqala nakweyiphi na indawo kwaye unqumle kwaye ushiye naliphi na ixesha lokubuya kwakhona.
Olunye ukhetho lusebenzisa abasebenzisi beselula. Ukuba unayo ifowuni yeselfowuni ye-Android nantsi enye yeendlela eziphambili ze-Enif TV.
Emva koko unokufaka usetyenziso oluzokunika ukufikelela ngokuthe ngqo kwii-serials ze-Turkish ezibizwa ngokuba ziilwimi zasekuhlaleni. Oku kubandakanya I-Abbasi TV Apk, iFilms App, yaye Makki TV.
Ungajonga ngakumbi ngezi zicelo kwaye ukhuphele ifayile ye-APK ngompu omnye. Emva koko unokonwabela idrama yaseTurkey kwiifowuni ze-Android naphi na nangaliphi na ixesha.
I-Enif TV lulongezo lwamva nje kwimithombo ye-intanethi ukusuka apho unokukonwabela iidrama kunye neminye imiba ye-showbiz evela kwihlabathi liphela. Apha, ezi ziqendu zibizwa kuwe ngesiHindi nangesiUrdu. Konke okudingayo kukunxibelelana kwe-intanethi kunye nesixhobo sokufikelela kwisitishi.
Osman Ghazi ngesiHindi
Osman Ghazi eUrdu
Iidrama zaseTurkey kwi-Android
Ubugcisa noyilo (2)
Imephu zasimahla kunye ne-Navigation APP (1)
& Health Fitness (7)
Iimephu kunye nokuhamba (1)
Abadlali beVidiyo kunye nabaHleli (19)
Ukutya & Ukusela (2)
Umdlalo oSimahla weSimahla (1)
imidlalo yokuzonwabisa (121)
Umdlalo wesisa wamahala (1)
Ukuqhekezwa komdlalo (23)
Ukudlala indima (6)
Ukukhangela iiNkqubo (26)
Iindaba neeMagazini (4)
Isimahla APP yeNtlalo (1)
Ukuqhekezwa kwe-WIFI (4)
Ilungelo lokushicilela © 2020 I-RoidHub - Ivenkile ephezulu ye-Rated yeGoogle